Taariikhda My Butros » Sida loo wajaho A Woman Online - Marka laga eego Naag A ee
Last updated: Jan. 13 2021 | 5 min akhri
Intaan lay guursaday waxaan la kulmay ii gooniga ah shukaansiga online, oo ay ku jiraan dad badan oo e-mails ka kooxaha online. Run ahaantii anigu ma heli wanaag ka arki, xun oo fool xun ugu. Oo anigu MySpace kula badan oo saaxiib ku saabsan aragnimada shukaansiga online ay. Maqaalkani waxa uu koobaya waxa uu si fiican u shaqeeya a e-mail ugu horeeyay ee dumar ah iyo waxa orod dhiig aan si qabow oo ay gacmahayagu ku dhuftay ka hor dhamaadka qeybta tirtirto!
Ha noqon saaxiibtinimo - Waxay u dhawaaq cad iyo aad ula yaabay sida badan oo dadka this iloobin marka ay furitaanka e-mail u diraan. Waa sidii qayb ka mid macquul rag ah oo maskaxda ka qaadataa in ka badan oo ay doonayaan in ay helaan xaq u leedahay in ganacsiga (ku hadalka telefoonka / shukaansi ama xitaa galmada). Nasiib daro aan dumarka ma mid sidaas u shaqaysa. Waxaan si fartiisa noo suulka iyo arko sida aan dareensan tahay in aad marka hore jeclaan. Waxaan jecel nahay in la romanced iyo la kulmaan saaxiibtinimo wada hadalka iyo dareenka aad ka. Ka fikir waxa ka mid ah sida 'noo kulaalaya up' haddii aad rabto. Had iyo jeer furan oo saaxiibtinimo ah, sheekaysanayo oo e-mail (ma aad u dheer) oo waxaad ka heli doontaa jawaabaha badan.
Ha ku hayn Nuur oo xiiso leh - Waxaa jira miisaanka u dhexeeya xiiso / fiiro boobka ragga iyo derbiga / off-gashan. Waan ogahay in ay dareemi karaan in cadaadis marka aad isku dayayaan in ay qori a furitaanka wanaagsan e-mail. Talada ugu wanaagsan ee aan ku siin karto waa in aad adigu noqon. Akhri qaybta hoose ee ku saabsan sida loo ilaaliyo in aan caajiso oo halkan yihiin laba qof oo ah talooyin aad u caawin in aad naftaadu timaaddo sidii xiiso leh oo ha ogaado adigu waad ka qiimo emailada. Si taxadar leh u akhri iyada profile iyo faalo aad halkaas ka heli. Qisoon u celi wax ku soo maray haddii ay suurogal tahay inaad abuurtaan xidhiidh. Amaanta shaqadooda si wanaagsan u bixiyo, ma ay joogin talax tago oo waa dhab. Mid ka mid bogaadin u yar wax u wanaagsan ah e-mail ugu horeeyay. Sidoo kale waxaad kala hadli kartaa wax kugu dhacay adiga in aad maalin, wax muujinaysaa xoogaa ah qofka aad tahay. Haddii aad tahay nin funny si xor ah u isticmaali kaftan yar, ma keliya ka badin. Kaftan qalalan si fudud lagu misconstrued karaa via e-mail. Haweenka xirmaan iyada oo loo marayo shucuur iyo waayo-aragnimo la wadaago, iyo haddii aad abuuri karto xiriir ah oo iyada la nuskii waxaa.
Ma u dhawraan gaaban - Inkasta oo aanu rabnaa in aad noqon saaxiibtinimo oo xiiso leh aynaan u doonayn in maqaalka ah. Bogga A oo dhan qoraal badan tahay noo soo diri doonaa seexan kartaa, haddii aan ku akhrisato dhan, Si kastaba ha ahaatee lugtii waxaa laga yaabaa in. Marka ugu wanaagsan waxaa laga yaabaa inaan caayey akhri oo aan noqon doono canaan iyo la yaabanahay haddii aad iskaa u qabo hanashada marka aan furo e-mail si aad u aragto bogga dhan ah qoraal! Your e-mail u baahan yahay in la heli karo iyo fududahay noo akhri, taas oo macnaheedu yahay gaaban iyo dareenka dilis. Tag for tayo ka badan tirada. A qoraal kooban oo impactful yar iyo bogaadin ah waa wadadii guusha.
Ha noqon caajis - OK aan aaminsanahay waxa ay noqon kartaa mid adag in la ogaado wixii aad odhan lahaydeen, sidaa darteed waxaan u tegayaa inaan ku siin dhowr tilmaamo degdeg ah. Caajiso qoray liiska oo ah alaabtii naftaada ku saabsan sida aad u nisbayn, ama farriin u diraysaa waxa xaqa waydiiyey in ay kor u yahay ee la lahayn macluumaad kale oo hadlaya. Haddii aanay aad u dareento isku shakhsiyadaada ka aad e-mail, iyadu ma ay ogaan doonaan in ay rabto in ay la hadasho si aad u. Oo sidaas daraaddeed ayay kaliya dhibin doonaan in ay soo jawaabin. Waxaad rabaa in ay ku khasbanaatay inay dib u qoraan dareento. Kaliya Ha qorno aad profile, iyada akhrin doonaa in haddii ay xiiseynayo.
Ha cheesy - Rag badan overcompensate doonaa oo isku day aad u adag. Tani waxay u ekaan karaa in ka badan-isticmaalka bogaadin iyo / ama kaftan, oo had iyo jeer yimaado off ee ugu fiican sida cheesy, iyo ugu xumaa sida aad ugu baahan. Qor iyada sidii aad saaxiib dumar hadlaya, in aad ka hortagi doonaa in ay aad uga rasmi ah oo ku dhacaan maan ah isku dayaya adag tahay in iyada caddayn ah. Isticmaal kaftan iyo bogaadin laakiin Tolosnaada. Sida cusbo cuntada ka dhigaysaa fiican, way wanaagsan tahay oo kaliya marka isticmaalay, Isla nidaamkaas ayaa halkan ku haboon.
Ha ku qorin shuruudaha oo dhan - Mararka qaarkood ragga ku qor doonaa wax walba oo ay raadinayaan in naag in marka hore e-mail. Mararka qaarkood waxay ku soo qoraan hadba dhan u nisbayn in aysan rabin (xitaa si daran - dhiibi!) Tan waxay ka timaaddaa sida adag iyo qof dumar ah oo u noqon doona qabow. Waxay u badan tahay inuusan ku jawaabno haddii aad taas samayn.
Ha slag off dumarka kale ee aad la kulanto online - Waxaa wax laga xumaado tahay iney aad u caan ka dhex ahayd maalmood shukaansiga online my, oo mar kasta waxay i diiday qabow. Waa arrin aad u raaxo loogu talagalay qof dumar ah in ay dhegeystaan ​​nin slagging off haweeney kale oo uu ku taariikhaysan. In dib maskaxda waxaan ka yaabban haddii aan la wadaagi doona aayaha la mid ah sida iyada oo ka dhigaysa noo dareemaan on tenderhooks yaabeen haddii ay sida xukumayn oo naga mid ah sida aad ahaayeen halkan. Ka fogow u eg, cudurkii.
Ha la hadal galmo ee e-mail ugu horeeyay! - Waxaan fahamsanahay in marka aad hesho qof dumar ah oo soo jiidasho aad u malaynayso jirka, oo waxaa jira wax qalad ah la this. Si kastaba ha ahaatee waxaan dumarka waa mid aad u xasaasi ah oo ku saabsan la soo dhawaaday Gaarna galmada. Dumar badan oo isticmaal goobta shukaansiga online, taasi ma aha sabab hoose waxaan jiraan, waxaan raadinayso shukaansi iyo / ama lammaanahaada ah nolosha. Waan ogahay kaasaa run ah ee tirada ugu badan ee ragga ku jira goobta shukaansi aad u, iyo nasiib daro waxa kale oo jira rag badan oo jira kaliya waxaa sababtoo ah waxay doonayaan inay welina waxaa jira. Iyo raadarada waxaa dareen leh soco in la ogaado ragga kuwa. Waxaan iyaga si dhakhso ah u baaraan bixi doonaa, si ay uga fogaadaan in lagu calaamadiyaa sida mid ka mid ah 'ragga kuwa'. Iska ilaali sheegin wax galmo ee ugu horeeya e-mails aad. Waxaan ognahay in ay jiraan talo soo baxay waxaa ka lab 'qaado fanaaniinta' kaas oo ka hadlayaa dhismaha ka sii daro iyo xiisad galmada, oo waxaas oo dhammuna waa si fiican oo wanaagsan, si kastaba ha ahaatee in fekerkeyga waxa uma shaqeeyo shukaansiga online. Ugu yaraan waxa kaliya ee ay shaqeysaa marka loo sameeyo si gaar ah. Shukaansi Fun fiican tahay, laakiin ma waxaad ka dhigi doonaa mid aad u heer haddii aad soo gaarto meel aad galmada ee isgaarsiinta koowaad. Si aad noo haweenka waa crass. Waxa uu dareensan yahay sida toobiye ah oo aan rumaysan nahay waxaan nahay mid ka mid ah ku walacay aad isleedahay habkani on. Xusuusnow, rabo si ay u dareemaan gaar ah. Shaqee on xiriir ah ayaa ugu horeeya, markaas qaar ka mid shukaansi tur.
Iskusoo wada heli maskaxdaada dhigay midig - Waa laga yaabaa in jannada, iyo xusuusan iyadu waa hal haweeney ka mid ah dad badan oo. Haddii ay dhibaato kaa haysato xirmaya haweenka online iyo helitaanka jawaabood in farriimo aad, eegto maskaxdaada dhigay koowaad. Miyaad dareensan tahay in aad ugu baahan? Ma u dhigay rajada oo dhan hal e-mail marka aad u soo diri? Haddii ay sidaas tahay tan ku arki doonto e-mail iyo dumarka off gelin doonaa. Shaqada aad kalsooni u gaar ah oo maskaxda ku dhigay si aad u ogaato waxa jira fursado badan oo aad u. Taariikhaha aad iman doonaa oo natiijada kasta 1 e-mail aan muhiim ah. Tani waxay yeelan doontaa in aad awood u diri xiiso leh, farriimaha kaakala dhiirigalin iyo nuur heli doontaa jawaab wanaagsan.
Sidee inaad ku raaxaysatid Date First
Saddex Tips for Success Online Dating
3 Talooyin inuu Abuuro Best Online Profile Dating